ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးအခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာသောပရိုဂရမ်များ Linux မှ
Un «Servidor Web» ကနှစ် ဦး စလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ် ကွန်ပျူတာ (ဟာ့ဒ်ဝဲ) ၎င်းသည် hosting နှင့် operating လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည် အင်တာနက်စာမျက်နှာများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများa ပရိုဂရမ်သို့မဟုတ်အစီအစဉ်အစု (ဆော့ဝဲလ်) ထိုအင်တာနက်စာမျက်နှာများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အသုံးပြုရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဆော့ဝဲလ်အဆင့်တွင်၊ က၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအောင်မြင်ရန် «Servidor Web»ယနေ့များစွာသောသူတို့၌ရှိ၏ အောင်မြင်သောအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြေရှင်းမှုများ ရရှိနိုင်ပါသည် စီးပွားဖြစ်, စီးပွားဖြစ်နှင့်တံခါးပိတ်ဖြေရှင်းချက်မှအခြားနည်းလမ်း ကမ္ဘာ့အဆင့်မီကုမ္ပဏီကြီးများ၏။
တစ် ဦး ချင်းစီ၏အစီအစဉ်တစ်ခု «Servidor Web» စီမံခန့်ခွဲ «Protocolo de Transferencia de Hipertextos (Hypertext Transfer Protocol o HTTP)», ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုဖွင့်သောဖိုင်များကိုအသုံးပြုသူများအား (အွန်လိုင်းမှ) ရရှိနိုင်စေရန် ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ.
အုပ်စုတွင်တစ် ဦး «Servidor Web» ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောပရိုဂရမ်များကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်သည်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်နိုင်သည် အင်တာနက်ဒါမှမဟုတ်အင်ထရာနက်၊ အီးမေးလ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များလှည့်လည်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်၎င်းတို့အတွင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဒေတာဘေ့စ်များ (BD) တွင်ထားရှိသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးသောညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်းတို့ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
1.1.3 အခြားအခမဲ့၊ ပွင့်လင်း၊ သီးသန့်၊
1.1.4 Web Servers ပရိုဂရမ်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များ
1.2.3 အခြားအခမဲ့၊ ပွင့်လင်း၊ သီးသန့်၊
1.2.4 ဒေတာဘေ့စအစီအစဉ်များအပေါ် updated သတင်းအချက်အလက်
1.3 Programming၊ Scripting နှင့် Markup ဘာသာစကားများ
1.3.3 အခြားအခမဲ့၊ ပွင့်လင်း၊ သီးသန့်၊
1.3.4 Web Development အတွက်အပိုနှင့်အပိုဆောင်းနည်းပညာများ
2 Web Servers အမျိုးအစားများ
3 အခမဲ့နှင့်အခမဲ့မဟုတ်သော Web Server Packages
Basic Web Server ကိုများသောအားဖြင့်အခြေခံကျသောပရိုဂရမ် ၃ မျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် -
Programming၊ Scripting နှင့် Markup ဘာသာစကား
အခြားအခမဲ့၊ ပွင့်လင်း၊ သီးသန့်၊
Apache ကို Tomcat
Apache Traffic Server ဖြစ်သည်
Web Servers ပရိုဂရမ်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များ
IBM က DB2
Oracle က NoSQL
Microsoft က Azure စားပွဲတင်သိုလှောင်မှု
ဒေတာဘေ့စအစီအစဉ်များအပေါ် updated သတင်းအချက်အလက်
Programming၊ Scripting နှင့် Markup ဘာသာစကားများ
Web Development အတွက်အပိုနှင့်အပိုဆောင်းနည်းပညာများ
Overflow Deverloper စစ်တမ်းကိုပုံ
Web Servers အမျိုးအစားများ
အထက်ဖော်ပြပါအစီအစဉ်များသည်aအတွင်း၌မည်သို့ပေါင်းစည်းသည်အပေါ် မူတည်၍ «Servidor Web» ပြည့်စုံသောအဖြေတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းတို့ကိုအောက်ပါအတိုင်းခေါ်ဆိုခြင်း (သို့) ခွဲခြားသည်။
မီးအိမ်: Linux + Apache-MySQL-PHP လည်ပတ်ရေးစနစ်
LAMPPP Linux OS + Apache_MySQL / MongoDB_PHP / PERL / Python
LNMP Windows Operating System + Nginx_MariaDB_PHP
LAPP Linux Operating System + Apache_PostgreSQL_PHP
MAMP- MacOS + Apache_MySQL_PHP လည်ပတ်ရေးစနစ်
MAMPPP MacOS + Apache_MySQL_PHP_PERL_Python လည်ပတ်ရေးစနစ်
MAPP MacOS + Apache_PostgreSQL_PHP လည်ပတ်ရေးစနစ်
WIMP Windows Operating System + IIS_MySQL_PHP
WNMP- Windows Operating System + Nginx_MariaDB_PHP
WAMP- Windows Operating System + Apache_MySQL_PHP
WAMPPP- Windows Operating System + Apache_MySQL_PHP / PERL / Python
WAPP- Windows Operating System + Apache_PostgreSQL_PHP
XAMPP Linux / MacOS / Windows လည်ပတ်ရေးစနစ် + Apache_MariaDB_PHP / Perl
အခမဲ့နှင့်အခမဲ့မဟုတ်သော Web Server Packages
အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်ဖော်ပြထားသောအစီအစဉ်များသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနှစ်မျိုးစလုံးတွင်တည်ရှိသည် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း software ကို၏လောက၌ရှိသကဲ့သို့ ပုဂ္ဂလိကနှင့်ပိတ်ထားသောဆော့ဝဲ တစ် ဦး ၏ပြည့်စုံအကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက် ဝဘ်ဆာဗာ:
မှတ်စု: စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းသည်ထိုက်တန်သောအခြားနည်းပါးသောလူသိများသည့်ဥပမာများဖြစ်သည်။ laragon XAMPP Web Servers များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်။
ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိဖို့ «Servidor Web» ကြာသည် ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပြီးပြုပြင်ပါသို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းအစီအစဉ်များသို့မဟုတ်ပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည် «Servidor Web» ၎င်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်ပြီးအသုံးပြုရမည့်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် Operating System ၏စွမ်းရည်နှင့်လက္ခဏာများ၊ စီမံခန့်ခွဲရမည့်စာမျက်နှာများ (သို့) ဝဘ်စနစ်များနှင့်အမျိုးအစားများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ software ဖွံ့ဖြိုးရေးကိရိယာများ ဒါကအမှုဖြစ်လျှင် install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျမဆိုဖန်တီး, စီမံခန့်ခွဲသို့မဟုတ်အသုံးပြုခဲ့လျှင် «Servidor Web» ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောသူတို့၏အမျိုးအ မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုငါတို့နဲ့မျှဝေပါ မှတ်ချက်တွေကတဆင့်ငါတို့အတူတကွတစ်ခုလုံး၏အသိပညာကြွယ်ဝစေတယ် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အသိုင်းအဝိုင်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » ၀ က်ဘ်ဆာဗာများ။ ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောပရိုဂရမ်များ
၎င်းသည် markup language တစ်ခုဖြစ်သည်။ HTML ဖြင့်သင် database များကိုသူ့ဟာသူလက်လှမ်းမမှီနိုင်သကဲ့သို့၎င်းသည် programming language ဖြစ်သည်ဟုပြောရန် function များ၊ cycles သို့မဟုတ်အလားတူအရာများမရှိပါ။
မင်္ဂလာပါ M13 ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမှန်အတိုင်းပြောရရင်သင်လုံးဝမှန်ပါတယ်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကာကွယ်ရေးအတွက်ထည့်သွင်းသည်မှာ HTML သည် markup language ဖြစ်သော်လည်းယခု၎င်း၏လက်ရှိ version (HTML5) တွင် markup language တစ်ခုထက်မကကြောင်းငါထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ ငါတို့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ ယုတ္တိရှိသည့်အရာမှာဝက်ဘ်စာမျက်နှာများသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်အပလီကေးရှင်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲသူမည်သူမဆို၎င်း markup language (HTML5) ကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်ခြင်းတို့အတွက်ကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့်စာရင်းထဲတွင်၎င်း၏ပါဝင်။ HTML1 သည်ယခု HTML5 မဟုတ်ကြောင်းပြသရန်အတွက်အနည်းငယ်မျှသာကူညီမှုတစ်ခုအနေဖြင့်နားလည်မှုနည်းပါးသောဤလင့်ခ်ငယ်လေးကိုချန်ထားခဲ့သည်။ https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုမှတ်သားပြီးဆောင်းပါး၏စာသားတွင်လိုအပ်သောချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ input ကိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဒါဟာအစကောင်းတစ် post ကိုပုံရသည်? တိကျရှင်းလင်းပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း…။ အမှန်စင်စစ် HTML (၎င်းသည် markup language တစ်ခုဖြစ်သည်)၊ သင်က၎င်းကိုဝဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြည့်စွက်ရန်သို့မဟုတ်အရန်နည်းပညာအဖြစ်ဖော်ပြသကဲ့သို့ကြီးမားသောပြproblemနာမရှိပါ။ မင်္ဂလာပါ !!